चलचित्र Archives - Page 96 of 126 - Medianp
‘प्रेमगीत २’ को सुटिङ सेटको बाहिरियो क्लाईमेक्स सिन , सस्पेन्स खुले पछी निर्माता तनाबमा
मिडिया एनपी ४प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ३१, २०७४११:१३0
काठमाडौं, ३१ जेठ । साउन १३ गते प्रदर्शनमा आउन लागेको सन्तोष सेनले निर्माण गरेको फिल्म ‘प्रेमगीत २’ का केहि क्लाइमेक्स सीनहरु लिक भएको छ । सुटिङ सेटबाट क्लाइमेक्स सिन बाहिरिएको हो । फेसबुक मार्फत एक व्यक्तिले ती
के प्रियंकाले नाकको सर्जरी गराएकी हुन् ?
Media NPप्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ३१, २०७४१०:२०0
एजेन्सी । बलिउडड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा हालै अमेरिकाबाट मुम्बई फर्कने बेला एक फोटो इन्स्टाग्राममा शेयर गरिन् । जब फोटो इन्स्टाग्राममा हालिन् सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा पायो । खासमा उनले शेयर गरेको फोटोमा उनको नाक पहिलेको भन्दा
नायिका नम्रता श्रेष्ठको आज जन्मदिन, ३३ वर्ष लागिन
Media NPप्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ३१, २०७४०८:३०0
काठमाडौँ ३१ जेठ । नेपाली चलचित्रकी राम्री नायिकामा पर्ने नम्रता श्रेष्ठ ३२ पुगेर ३३ वर्षमा प्रवेश गरेकी छन् । मोडलिङ हुँदै चलचित्र क्षेत्रमा प्रबेस गरेकी उनको पहिलो चलचित्र सानो संसार हो । सन् १९८५ जुन १४ मा धरानमा जन्मिएकी उनले `१४
नायिका करिष्माका श्रीमान् विनोदले दिए बाबुरामलाई जेरी उपहार (हेर्नुहोस् भिडियो)
Media NPप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, जेठ ३०, २०७४१८:१७0
काठमाडौं, ३० जेठ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीले मंगलबार पहिलो वर्षगाँठ मनाएको छ । तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी परित्याग गरि भट्टराईले सो पार्टी गठन गरेका थिए । उक्त पार्टीमा विभिन्न क्षेत्रमा
फोर्ब्सको सूचीमा ओरालो लागे बलिउड सेलिब्रेटीहरु
Media NPप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, जेठ ३०, २०७४१६:२१0
एजेन्सी । फोर्ब्सले यो वर्ष सबभन्दा धनी सय सेलिब्रेटीहरुको सूची प्रकाशन गरेको छ । फोर्ब्सको टपटेनमा भने बलिउडका कुनै पनि स्टारहरु परेनन् । २०१६ को अगष्टमा टपटेनमा परेका सलमान खान, अक्षयकुमार शाहरुख खान यति बेला चिप्लेर ५०
निशा र हसनको ‘रोमियो’ कात्तिकमा
Media NPप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, जेठ ३०, २०७४१४:२४0
काठमाडौं, ३० जेठ । शंकर कार्कीको निर्देशन रहेको नेपाली कथानक चलचित्र ‘रोमियो’ कात्तिकमा रिलिज हुने भएको छ । यसअघि वैशाख २९ गते रिलिज हुने भनिएको ‘रोमियो’ अब कात्तिक १७ गतेबाट रिलिज हुने भएको हो । निर्माता
अभिषेक-ऐश्वर्या सात वर्ष पछि सँगै काम गर्ने
Media NPप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, जेठ ३०, २०७४१३:३७0
एजेन्सी । बलीउडका अभिनेता अभिषेक बच्चन र अभिनेत्री ऐश्वर्या राय सात वर्ष पछि सँगै काम गर्ने भएका छन् । अनुराग कश्यपको फिल्म ‘गुलाब जामुन’ मा अभिषेक र ऐश्वर्या एक साथ देखिने भएका हुन् । अद्यपि अभिषेकले
रोहित शेट्टीले सलमान र ‘बाहुबली’का प्रभासलाई लिएर फिल्म बनाउने
Media NPप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, जेठ ३०, २०७४१३:३१0
मुम्बई, ३० जेठ । हिट फिल्म निर्माण गर्दै आएका रोहित शेट्टीले सुपर स्टार सलमान खान र बाहुबलीबाट चम्किएका प्रभासलाई दिएर फिल्म निर्माण गर्ने भएका छन् । राहितले दुई हिट स्टारलाई लिएर फिल्म निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको